मधेशी मोर्चाको आलोचना भनेको मधेशी जनताको आलोचना होइन : शंकर पोखरेल, नेता, नेकपा एमाले
० केही समय पहिले मधेशीहरूलाई लक्षित गर्दै समाजिक संजालमा तपाईले विवादित धारणा दिनुभयो ? यसको व्यापक विरोध पनि भयो नि ? किन होला ?
— त्यतिबेला मधेशमा कालो दिवश मनाउने भन्ने सन्दर्भ चलिरहेको थियो । युरोपेलि परम्पराअनुसार सेताहरू विशिष्ट हुन् र कालाहरू हेय हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो परम्पराको सुरूवात भएको हो । मधेशी मोर्चा जसले मधेशी जनताको हितको कुरा गर्छ, मधेशमा बहुसंख्यक जनता कालो वर्णका छन्, कालो दिवस किन मनाउने यो जनता माथिको अपमान होइन भन्ने अर्थमा ट्वीट लेखेको थिए । तर, त्यसलाई गलत तरिकाबाट चित्रण गरियो । कालो र गोरोको रूपमा विभाजन ल्याउन खोज्यो भनेर हेरियो मेरो मनसाय त्यस्तो थिएन । कालोलाई विरोधको प्रतिक बनाउने कुरा चाँहि गोराहरूको मानसिकताको परिणाम हो ।
० मधेश आन्दोलन र कालो दिवससँग मधेशीको रंग र रूप कहाँबाट जोडियो ?
— स्वभाविक रूपमा जोडिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा रोर्बट मुकावेले भन्नुभएको छ कालाहरूलाई हेपाईको दृष्टिकोणले हेरेर प्रयोग गर्ने शब्दहरू जबसम्म अन्त्य गरिदैंन तबसम्म जातिय विभेद अन्त्य हुँदैन ।
० त्यसो भए कालो भन्ने शब्द नै हटाऊँ भन्न खोज्नुभएको हो त ?
— कालोलाई नकारात्मक रूपमा लिने कुरा युरोपेली मानसिकताको उपज हो । ब्रिटिश उपनिवेशिक मानसिकताको उपज हो त्यस्ता कुराहरू हामीले किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको बहस गर्न खोजेको हुँ ।
० कालो दिवस मनाउनु हुँदैन, कालो झण्डा बोक्नु नै हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
— हुँदैन । त्यो कालो रंगप्रतिको अपमान हो ।
० तर, तपाई कै पार्टीका विभिन्न सन्दर्भमा कालो झण्डा बोकेको देखिन्छ ?
— त्यो गलत हो सच्याउनु पर्छ ।
० तर, तपाईले नेपालमा बसेर यस्तो अभिव्यक्ति लिदईरहँदा त नश्लीय आधारमा दिएको अभिव्यक्ति भनेर आरोप लगाइयो नि ?
— आरोप त जे पनि लगाउन पाईन्छ तर यथार्थमा मेरो प्रस्तुती नश्लवादको विरूद्धमा थियो । वास्तवमा कालो रंगमाथि अपमान गर्नुहुँदैन राजनीतिमा यस्ता बिम्बको प्रयोग नगरौं मात्र भनेको हुँ ।
० मधेशीहरू काला वर्णका छन् ? त्यहाँ त नश्लीय चिन्तन देखियो नि ?
— अधिकांश भन्ने अर्थको प्रयोग भएको छ । कालो वर्ण भन्ने बित्तिकै त्यो नश्लीय हुन्छ । जब नकारात्मक ढंगले टिप्पणी गरिन्छ त्यहाँ विभेद हुन्छ । रंग त कसैको कालो, कसैको गोरो हुन्छ त्यसको चर्चा गर्ने बित्तिकै नश्लीय हुन्छ र, हुँदैन नि । त्यतिबेला नश्लीय हुन्छ जतिबेला कालोको रूपमा विरोध हुन थाल्छ ।
० अहिलेसम्म तपाईलाई यस्तो धारणा राखेर मैले गल्ती गरे भन्ने महसुस भएको छैन ?
— यो सही विचार हो । तर, यसलाई बुझाउन नसक्नु मेरो कमजोरी हो । मैले जे कुराको सन्देश दिन खोजेको थिए त्यसमा बुझाउन समस्या भयो र मान्छेहरूले गलत अर्थ लगाईदिए त्यही भएर मैले त्यो स्टाटस हटाईदिए ।
० एमालेका अन्य नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन्छ तर उहाँहरूले पछि स्पष्टिकरण दिँदा बुझाई गलत भयो मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन भन्नुहुन्छ ? भनाई र बुझाई कसरी फरक पर्दो रहेछ ?
— मधेशी मोर्चाको आलोचना गर्नु भनेको मधेशी जनताको आलोचना गर्नु होईन । मैले मधेशी मोर्चाको पक्षमा उभिएर कालो दिवस मनाउनु हुँदैन भनेको हुँ तर त्यो विचारलाई बुझाउन नसक्नु मेरो कमजोर पक्ष हो । मधेशी मोर्चाका मित्रहरूले गलत ढंगबाट व्याख्या गरिदिनुभयो त्यसपछि भ्रम सिर्जना भयो । जुन विषयले भ्रम सिर्जना गर्छ त्यसलाई राखिराख्न ठिक लागेन त्यसैले मैले हटाईदिए । मेरो मधेशी जनताप्रति सम्मान भाव छ र म सधैं मधेशी जनतालाई सम्मान गर्छु ।
० अहिले आएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
— त्यसप्रति दृष्टिकोणमा बहस हुँदैन र । हामीले संविधान बनाउँदा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नको लागि प्रदेश सभाको अनुमति चाहिने सन्दर्भ संविधानमा राख्यौं अहिले प्रदेशसभा छैन प्रदेशसभा नभइ सीमांकनमा हेरफेर गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क हाम्रो हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा गयो सर्वोच्चले पनि यो कुरालाई ख्याल गर भनेकै छ यस अर्थमा सर्वोच्चले भनेको कुराबाट हाम्रो मान्यता पुष्टि भइसकेको छ ।
० सर्वोच्चले त संविधान संशोधनको विषयमा हामी बोल्न मिल्दैन भनेको हो ?
— मिल्दैन तर संविधान संशोधन गर्दा संविधानको धाराहरूलाई हेक्का राख त भनेकै छ नि ।
० तपाईहरू यो संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती किन भन्नुहुन्छ ?
— यो संशोधनले राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ राजनीतिक विश्लेषण गरौं न । मधेशी मोर्चाले गरेको सबै माग राष्ट्रको हितमा हुने अनि एमालेले गरेको चाँहि राष्ट्रघाती हुने भन्ने विचार कसरी मान्न सकिन्छ । स्वभाविक रूपमा जे कुराले यो मुलुकको हित हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यो कुरालाई रोक्ने कोशिस हामी सधैं गछौं ।
० चारवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो चाँहि राष्ट्रघाती छन् कि छैनन् त्यो त जनताले छिनोफानो गर्ने हो नि ?
— त्यही भएर त जनताको विचमा जाउँ, चुनावमा जाऊँ भनिरहेका छौं नि । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने कुरा संविधान अनुसार नै मिल्दैन ।
० केके कुराले मुलुकलाई हित हुँदैन भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने अधिकार एमालेलाई कसले दियो ?
— एमाले एउटा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने शक्ति हो । आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउँछ । मधेशी मोर्चाले जे भन्छ त्यो ठिक हो भन्ने हो भने छुट्टै पार्टी किन खोल्नुप¥यो मधेशी मोर्चामा एकताबद्ध भए भईहाल्यो नि ।
० मधेशमा दुई प्रदेश हुँदा के हुन्छ ?
— केही हुँदैन । मधेशमा दुई प्रदेश मात्र होइन धेरै प्रदेश छ त । मधेशको जनताको माग अनुसार अगाडि बढ्ने हो, मधेशी मोर्चाको माग अनुसार अगाडि बढ्न सकिदैन । नेपाली समाजमा भिन्न भिन्न विचार बोकेका व्यक्तिहरू छन्, सबैलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
० तपाईले पनि राजनीतिको सुरूवात त मधेशबाट नै गर्नुभयो होईन र ?
— मेरो पुर्खा एकीकरणको समयमा बहादुर शाहसँगको फौजसँग लडाँई लडेको पुस्ता हो । मेरो जन्म दाङमा भएको हो । म मधेशी जनताको भावना बुझ्छु । एक÷दुई व्यक्तिले केके माग गर्छन् त्यो सबै माग पुरा गर्न सम्भव नहोला । सबैभन्दा धेरै थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले नै हो । अनि एमालेले मधेशी थारू, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने पनि हुन्छ ।
० एमालेलाई मधेश विरोधी पार्टी भन्ने गरिएको छ नि ?
— यो पूर्ण गलत कुरा हो । मधेशका बहुसंख्यक जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी एमाले हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा मधेशका नगरहरूको सुमृद्धिका लागि प्रत्येक सदरमुकामका लागि ५०÷५० करोड रूपैयाँ छुट्याएर मधेशको विकासमा ध्यान दिएको छ । एमालेको सरकारले मधेशलाई धेरै विषयमा अगाडि ल्याउन पहल गरिरहेकै छ ।
० एमालेको सरकारले यो वर्ष मधेशको विकासको लागि धेरै बजेट छुट्याएको छ तर तपाईका पार्टीका व्यक्तिहरूले दिने अभिव्यक्तिले मधेश विरोधी पार्टी भनेर चिनायो कि ?
— बोलीले मात्र समस्या उत्पन्न भएको होइन । मधेशी मोर्चाको आलोचनालाई नै मधेशी जनताको आलोचना गरेको भनेर मिडियाबाट पनि बढी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भयो । मधेशी मोर्चा भनेको राजनीतिक दल हो, त्यसको आलोचना हुनसक्छ भन्ने कुराको आधारमा विश्लेषण गरिएन । मधेशी मोर्चाको विरोध गर्दा मधेशी जनताको नै विरोध गरेको हो कि भन्ने मनोविज्ञान तयार भयो । त्यसले गर्दा एकप्रकारको समस्या पैदा गरेको छ । मधेशी मोर्चाको विरोध गर्नु भनेकै मधेशी जनताको विरोध होईन भन्ने कुरा नेकपा एमाले स्थापित गर्न चाहन्छ र हाम्रो प्रयास अब त्यो बाटो तर्फ जाँदैछ । अब हामी मधेशी जनतालाई साथ लिएर मधेशी मोर्चाको आलोचना गर्ने अभियान चलाउँछौं ।
० संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न तपाईहरू किन अवरोध गरिराख्नु भएको छ ?
— हाम्रो असहमतिको विचमा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गरेको छ । हाम्रो असहमतिको बिचमा पास गर्ने सामथ्र्य उहाँहरूसँग छ भने अगाडि बढ्दा हुन्छ । हामी के गछौं हाम्रो ठाउँमा छोड्दिनुस् । हाम्रो अवरोधमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्न मिल्ने पास गर्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ ।